Global Voices teny Malagasy » Miresaka Momba Ny Fiainana Andavanandro Any Monrovia Ireo Liberiana Mpitoraka Bilaogy · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 10 Jolay 2017 15:10 GMT 1	 · Mpanoratra David Sasaki Nandika (fr) i Abdoulaye Bah, Arimalala
Sokajy: Amerika Avaratra, Etazonia, Liberia, Fifindràmonina, Mediam-bahoaka
(Fanamarihana : Lahatsoratra nivoaka tamin'ny Aogositra 2009)
Nanana fahafahana tokana hanintonana ny sain'ny haino aman-jery iraisam-pirenena  i Liberia tamin'ity volana ity (Aogositra 2009) rehefa nitsidika an'i Monrovia sy ny Filohan'i Liberia, Rtoa Ellen Johnson-Sirleaf,  ny Sekreteram-panjakana Amerikana, Rtoa Hillary Clinton .
Sarin-Rtoa isany Ellen Sirleaf-Johnson sy Hillary Clinton nalain'i Glenna Gordon 
Glenna Gordon , Amerikana mpanao gazety miasa ao Monrovia izay nandray anjara tamin'ny fikarakarana seminera fampiofananana ireo Liberiana mpitoraka bilaogy , no nanamarika tao amin'ny lahatsoratra iray ho an'ny Time Magazine fa nanome vola maherin'ny 2 miliara Dolara Amerikana an'i Liberia ny governemantan'i Etazonia hatramin'ny 2003, “ny vola ambony indrindra ho fanampiana isan'olona tsy mbola hita hatramin'izay na taiza na taiza teto amin'izao tontolo izao”.
Mifantoka amin'ny tahirin-kevitra momba an'i Liberia ny ankamaroan'ny lahatsoratra mahakasika ny fitsidihan-dRtoa Clinton tany Liberia. Raha nanoratra ho an'ny Xinhua News, masoivohom-baovao ofisialy an'ny governemanta Shinoa, Atoa Li Xianzhi, nanao fanamarihana toy izao ny tonian-dahatsorany :
“Firenena any amin'ny sisiny andrefan'i Afrika i Liberia, voafaritr'i Sierra Leone, Ginea, Côte d'Ivoire ary ny Ranomasimbe Atlantika. Miavaka amin'ny tantaran'ny firenena Afrikana rehetra noho ny fifandraisany manokana amin'i Etazonia ny tantaran'i Liberia, araka ny Wikipedia.”
Lahatsoratra vitsy, raha nisy, no manonona ny Liberiana na mamaritra hoe toy ny ahoana ny fiainana andavanandro ao Monrovia renivohitra. Ho an'izany, mila mijery ireo lahatsoratry ny mpitoraka bilaogy any Liberia.
Mpanao gazety mahaleotena i Ruthie Ackerman , izay eo am-panoratana boky iray momba ireo liberiana mpitsoaponenana monina any Stanten Island any New York. Na izany aza, raha tokony hanoratra momba ireo mpitsoaponenana fotsiny, naniry hanampy azy ireo hitantara ny tantarany Rtoa Ackermann. Tamin'ny alalan'ny vatsy kely nomen'ny Rising Voices , nosokafany ny Ceasefire Liberia , sehatra hoanà bilaogy ho an'ny Liberiana monina ao Staten Island sy Etazonia ary ao Monrovia. Tamim-pahagagana lehibe, hatramin'izao, ireo mpitoraka bilaogy monina ao Monrovia no nandray anjara kokoa tamin'ny votoatin'ny tranokala miohatra amin'ireo mpiray tanindrazana aminy monina any New York.
Nat Nyuan-Bayjay , mpitoraka bilaogy iray ao amin'ny Ceasefire ao Monrovia, any Liberia
Raha nanoratra avy any Monrovia, Wellington Railey, 23 taona, namaritra ny fanamelohana mandrapahafaty an'i Chuku Diwl Afika, Nizeriana tanora  voaheloka noho ny namonoany Liberiana tanora nandritra ny sahotaka teo am-pivoahana ny Apple, toeram-pandihizana amin'ny alina. Nat Nyuan-Bayjay , lehiben'ny tetikasa Ceasefire Liberia any Monrovia, nandefa ireo sary sy fanehoankevitra momba ireo fihetsiketsehana roa, manohana sy manohitra ilay Truth and Reconciliation Commission  (Vaomieran'ny Fahamarinana sy fampihavanana) miteraka resabe. Ho famaritana ilay vondrona TRC an'ireo mpanohitra, manoratra  toy izao i Bayjay:
Ny hetsika, izay heverina lavitra ho toy ny hetsika “noforonin” ny fanjakana, dia nokarakaraina teo ambany fiahian'ny National Consciousness Movement of Liberia (NACOMAL) [Hetsika ho an'ny fahatsiarovantena nasionaly], vondrona iray mankasitraka ilay vaomiera ary tsara fanomanana. Olona an-jatony, notaterina tamin'ny fiara fitaterambahoaka nofaina avy any amin'ny tanàna ambany samihafa tao an-drenivohitra no nirohotra nankany amin'ny faritra ambonin'i Broad Street ao afovoan'i Monrovia, faritra nivorian'izy ireo.
Fahitana ny faritra ambanin'ny Broad Street ao Monrovia
Namoaka lahatsoratra koa i Nyuan-Bayjay momba ny fitsidihan-dRamatoa Clinton izay mitondra ny lohateny hoe “Clinton reaffirms US support to Liberia: Pledges US $17 million but wants action on corruption “. [Manamafy ny fanampian'i Etazonia an'i Liberia Ramatoa Clinton, fampanantenana 17 lavitrisa dolara amerikana ho takalon'ny hetsika ho fanafoanana ny tsolotra]. Na izany aza, ny tena mahagaga, dia ireo fanambaran'i Nyuan-Bajay momba ny resaka toy ny fahatapahan-drano vao haingana tao amin'ny Nosy Bushrod . Naka ny hevitry ny Liberiana salantsalany koa izy momba ireo lohahevitra izay miovaova, toy ny fahafatesan'i Michael Jackson  sy ny fankalazana ny andron'ny fahaleovantenan'i Liberia .
Hatramin'izao, tsy maneho fahalianana loatra amin'ny bilaogy sy ny asa soratra ireo Liberiana monina any New York, fa fahazotoana kokoa amin'ny rakitsary . Namokatra rakitsary maharitra 4 minitra ahitana ny zanany mandeha any an-tsekoly  i Garreston. Misy mpikambana ao amin'ny Ceasefire Liberia monina any Staten Island ao anatinà tarika hip-hop Genocide  izay nanao fampisehoana nandritra ny Park Hill Day tamin'ny volana Jolay. Namoaka ny rakitsarin'ny fampisehoan'izy ireo  i Liz mpiandraikitra azy ireo. Afaka mihaino ny sanganasa iray hafa an'ny Genocide ianareo ao anatin'ny rakitsarin'ny Ceasefire Liberia vao haingana nandritra ny fankalazana ny Andron'ny fahaleovantenan'i Liberia tany Trenton, dab Jersey .
Fandriho ny fahana RSS an'ny Ceasefire Liberia  mba hahafantaranao bebe kokoa momba ny tena zava-misy marina momba an'i Liberia any amin'ny lafiny roan'ny Atlantika
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/07/10/103088/
 hanintonana ny sain'ny haino aman-jery iraisam-pirenena: http://news.google.com/news/more?pz=1&ned=us&cf=all&ncl=dCBUcjs6fBknczMW2UbDlXmC5cemM
 Ellen Johnson-Sirleaf,: http://fr.wikipedia.org/wiki/Ellen_Johnson-Sirleaf
 Hillary Clinton: http://fr.wikipedia.org/wiki/Hillary_clinton
 Glenna Gordon: http://www.scarlettlion.com/2009/08/ma-ellen-n-hilary-clinton-r-sisters.html
 nandray anjara tamin'ny fikarakarana seminera fampiofananana ireo Liberiana mpitoraka bilaogy: https://fr.globalvoicesonline.org/2009/03/19/4418/
 nanao fanamarihana toy izao ny tonian-dahatsorany: http://news.xinhuanet.com/english/2009-08/13/content_11877488.htm
 ny fanamelohana mandrapahafaty an'i Chuku Diwl Afika, Nizeriana tanora: http://ceasefireliberia.com/2009/08/23-years-old-nigerian-sentenced-to-life-inprisonment-in-liberia/
 Clinton reaffirms US support to Liberia: Pledges US $17 million but wants action on corruption: http://ceasefireliberia.com/2009/08/clinton-reaffirms-us-support-to-liberia-pledges-us17-million-but-wants-action-on-corruption/
 ny fahatapahan-drano vao haingana tao amin'ny Nosy Bushrod: http://ceasefireliberia.com/2009/08/severe-water-shortage-in-the-midst-of-abundance-as-monrovians-resort-to-unsafe-drinking-water/
 ny fahafatesan'i Michael Jackson: http://ceasefireliberia.com/2009/06/jacksons-liberian-fans-divided-on-his-death/
 ny fankalazana ny andron'ny fahaleovantenan'i Liberia: http://ceasefireliberia.com/2009/08/ordinary-liberians%e2%80%99-view-on-independence-day-celebration/
 fahazotoana kokoa amin'ny rakitsary: http://ceasefireliberia.com/2009/07/staten-island-filmmaking-workshop/
 4 minitra ahitana ny zanany mandeha any an-tsekoly: http://ceasefireliberia.com/2009/06/who-knows-what-tomorrow-will-bring/
 rakitsarin'ny fampisehoan'izy ireo: http://ceasefireliberia.com/2009/08/video-park-hill-day/
 Andron'ny fahaleovantenan'i Liberia tany Trenton, dab Jersey: http://www.youtube.com/watch?v=HdsoTjujm9c